बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु यस्ता छन् ! - www.kchhakhabar.com
बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु यस्ता छन् !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २२, २०७४ समय: १३:३३:५०
काठमाडौँ । परिबर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् ।